Fampahalalana sy rohy amin'ny toro-hevitra amin'ny solosaina, tricks, fanadihadiana, vahaolana, vaovao ary fampahalalana mahaliana amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny IT. Tadiavo ny farany amin'ny vokatra vaovao, fifaninanana ary fanomezana.
Ny fijerena ny dingana fampandrosoana ao ambadiky ny GPD MicroPC (ary tsy misy ny version Intel)
Nohamafisin'i Microsoft ny hanoloana ny Surface Pro 4 tsy misy fepetra
Mpisera Facebook tsy nampihetsi-panoherana tsy nahitam-boka ho an'ireo mpandraharaha antoko fahatelo tamin'ny Septambra
Famerenana: Logitech Keys-To-Go finday tsara tarehy dia fitaovana tsara indrindra ho an'ireo matihanina amin'ny finday
Amin'izao fotoana izao, maro ireo matihanina finday no mividy fampakarana finday nentim-paharazana ho an'ny takelaka toy ny iPad Pro sy Surface Pro. Ireo fitaovana vaovao ireo dia manome hery lehibe, saingy tsy miaraka amin'ny klavie nentim-paharazana. Na dia afaka misafidy foana aza ianao hividy ny fandefasana lafo vidy Apple sy ...
Inona no atao hoe phishing? Torohevitra momba ny fiarovana ny kaonty amin'ny banky avy amin'ireo mpanao heloka bevava aterineto
Miaraka amin'ny fahafahana miditra amin'ny aterineto mivezivezy ao India, dia mihabetsaka ny olona miditra amin'ny sehatra an-tserasera noho izy manana fahamendrehana bebe kokoa amin'ny asa na fangatahana alahelo amin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny smartphone. Na izany aza, raha tsy mailo izy, na izy na ...
Samsung CHG90 famerenana - Azo atao ve ny manara-maso ny 32: 9 49-inch amin'ny fiainanao?
Tsy toy ny televiziona ny mpanara-maso ny ordinatera. Ny monitoranao dia mety manana 16: 9 ratio (izay ho an'ny horonan-tsoratra 16 isam-bolana no ahazoana 9 vertical vertical), fa ny orinasa tahaka an'i Samsung sy HP dia nanao koa 16: 10 dia mampiseho nandritra ny taona maro. Vao haingana, vondron'olon-tokana ...
Ny Facebook dia maneho ny andrana API izay mamoaka sary fanampiny ho an'ny apps ampaham-batana
Ny Facebook dia namoaka ny buggy API izay mety namoaka sary betsaka kokoa noho ireo mpampiasa azy ho an'ny mpamorona ny antoko. Amin'ny ankapobeny, ny API Facebook dia mametra ny fidiran'ny antoko fahatongavana ho an'ireo mpisera sary efa nizara tamin'ny famoaham-bokiny. Ny vokatry ny bug, na izany aza, nilaza ny orinasa fa ...
Farany! Efa misy ankehitriny ny mozika Apple amin'ny alatsinainy amin'ny mpiserasera mampiasa ny Alexa
Tapitra hatreto ny fiandrasana. Apple Music dia azo jerena amin'ny fomba ofisialy amin'ny alàlan'ny Amazon Echo. Ny voalohany dia navoaka tamin'ny volana novambra rehefa nanambara i Amazôna fa tsy ho ela dia hihazakazaka tsy ho ela ny serasera an-tseraseran'i Apple. Na dia izany aza, ny ampahany tsara indrindra dia ny fahatongavan'ny fanohanana ...
Star Wars Battlefront II Ankehitriny ny ampahany amin'ny EA Access Vault amin'ny Xbox One
Maniry ny hilalao baolina Star Wars Battlefront II ianao, saingy tsy nahasakana ny trigger noho ny lalao, moa ve isika hiteny, fandraisana ny fandraisana? Eny e, raha mpandray anjara EA Access ianao dia afaka manandrana ny Star Wars Battlefront II tsy mila fanampiana intsony ...
Facebook dia manaiky ny hanangonana ny sarinao tsy havoaka -nao sary; Data avy amin'ny mpampiasa 6.8 Million hita ho fampiharana Antoko fahatelo
Navoakan'ny Facebook ny fisafotofotoam-pandaminana iray hafa izay nahakasika an-tapitrisany ny mpampiasa azy - zavatra izay nanjary fahazarana ho an'ny tambajotra sosialy. Ny orinasa dia miteny fa misy bug dia namela mpizara antoko fahatelo hahita ny sarin'ireo mpampiasa Facebook izay nampakatra saripika sasantsasany fa tsy ...
Ny fonon'ny Kingdom Hearts III Limited PS4 Pro hanombohana ny lalao
Te-hilalao ny Fon'i Kingdom III amin'ny fomba fanao rehefa manomboka ny Janoary amin'ny Janoary? Eny ary, vao haingana i Sony dia nanambara fa ny "Kingdom Hearts III" PS4 Pro, izay voafetra ihany ny famoahana, dia afaka eo akaikin'ny lalao. Ny bundle dia ahitana ny 1TB PS4 Pro sy Dualshock 4.
Red Redemption Dead 2: Ireto ny toerana miafina 5 mba hahita fiadiana mahafinaritra
Red Dead Redemption 2 toerana miafinaTwitter / RockstarGames Ny Red Dead Redemption an'ny Rockstar Game dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ity taona ity. Ny lalao izay mifototra amin'ny fiainan'ireo andian-jiolahy tandrefana dia tonga any an-doha miaraka amin'i God of War. Satria nanomboka ny Rockstar Games ny ...
Misy fitaovana fanakanana feo tsara feo, avy eo dia misy ny 1000XM3 Sony: Review
Sony dia mety tsy nahazo ny fahambonian-karenan'ny sokajy smartphone tahaka ny misy ny solosaina sy ny vokatra audio. Raha mitady ny headphones tsara indrindra ianao hiaraka amin'ny smartphone anao, Sony dia manana tetikasa goavana, saingy ny WH-1000XM3 dia tena mendrika ...
7 dia manamarina fa malware ianao sy ny fomba hamahana azy
Satria ny PC dia very tsinontsinona ny lanjan'ny fahalavorariana fotsiny, dia manomboka mihena izany. Satria ny fifanakalozan-kevitra samihafa nataonao dia mifampiahy. Indraindray, ny rafitra miadana na ny fihetsika hafahafa dia mety ho hita sy hita maso ...
Ahoana no atao mba tsy hahatonga ny scareware
Efa nahita fampitandremana tsy nampoizina ve ianao tamin'ny fampitandremana lehibe iray izay tratran'ny ordinateranao? Mahay ianao; Azo antoka fa hanaiky izany fikasana mibaribary izany ianao hampitahotra anao amin'ny fametrahana Antivirus vaovao. Saingy tsy ny rehetra no manavakavaka. Olona maro be no mino izany ...
Ahoana ny amin'ny fanaraha-maso an-tariby sy Access Amazoniya
Ireo tompon'ireo Amazon Echo efa mahafantatra ny fomba hiantso ny Alexa amin'ny resaka mivantana amin'ny fitaovana. Ahoana anefa raha tsy eo akaikin'ny Echo ianao? Azonao atao ny miresaka amin'ny Alexa, manatanteraka asa samihafa, ary miditra amin'ny karazana votoaty samihafa. Azonao atao ny mifehy ny fitaovana Echo an-tserasera.
Ahoana ny fomba hahazoana maloto amin'ny malware
Tamin'ny andro voalohan'ny ordinatera manokana, ny mpisera tsirairay dia mila puppet tsara ara-teknika. Tsy hanomboka ny rafitra? Sokafy ny raharaha ary avereno alaina ny karazan-tsarimihetsika rehetra, angamba, na hanoritra ny terminal amin'ny pensilihazo. Mangataha fanampiana mandritra ny foto-kevitry ny fanontaniana.
QNAP mamoaka HS-453DX NAS silent: Two HDDs, Quad-Core SoC, HDMI 2.0, 10 GbE
Ny QNAP dia nampiditra NAS ho an'ny fanoherana izay mikendry voalohany amin'ny mpampiasa an-trano. Ny HS-453DX Silent NAS dia afaka manamboatra fiarakodia mafy roa ary izy io dia miasa miaraka amin'ny kitran-jiro efa-jiro Gemini Lake SoC. Afaka mampifandray ny serasera 10 GbE sy ny seranan-tsambo HDMI 2.0 ny boaty.
10 Tena ilaina mba hiarovana ny mombamomba anao
Ny fangalarana ny maha-izy anao dia afaka manimba ny tontolo misy anao, fa tsy amin'ny fomba tsara. Azonao atao ny manary ny fidiranao any amin'ny kaontinao ara-bola, na mahita anao amin'ny ligy tsy mahagaga ao an-tranonao. Mety higadra mandra-pahafatinao mihitsy aza raha misy olona manao heloka be vava eo aminao. Inona …
5 fitaovana tsara indrindra ho an'ny Fanaraha-maso Deep Packet amin'ny 2018
Ny tambajotra dia zavatra henjana hifehezana sy hanaraha-maso. Mazava ho azy fa ny fifamoivoizana dia mitranga ao anaty kabla varahina na fibre optique ary tsy hita izany. Izany dia mahatonga azy ho somary sarotra ho an'ny mpitantana rehetra mba hanana sary mazava sy voafaritra momba ny zava-mitranga.
1 2 3 4 ... 481 Manaraka
Ahoana ny fampitomboana ny RAM amin'ny Android Phone / Device mampiasa SD / Memory Card
Fomba fijerena 9 hampiroboroboana ny votoatin'ny marketing
Google hanakatona Google+
Ny Chronicle Alfabet dia manomboka ny VirusTotal Enterprise amin'ny Private Graph ary ny 100 im-pitiliana malware
Motorola Moto Power One andro androany miaraka amina rindran-damba maro be any India: Quick ...
Voaroaka: Afisy iray avy amin'ny ONEPlus 6T dia maneho ny famolavolan'ny fantson-drano manoloana ny fanombohana
Xiaomi Redmi Note 5 dia mandray MIUI 10 miaraka amin'ny fihetsika vaovao & bebe kokoa any India
Android 9.0 Pie-based OxygenOS 9.0 no fitsaboana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa OnePlus 6
Kingston manomboka HyperX Savage Exo SSD External
Vivo V11 Pro famerenana: Televiziona fakan-tsarimihetsika manana endrika manokana sy fiarovana
Tsindrio: Jiro mitsivalana tsy miasa ao amin'ny Windows 10
Ahoana ny fametrahana Thunderbird 60 ao amin'ny Ubuntu 18.04, 16.04
Install & Update Kernel 4.19-rc5 amin'ny Linux Ubuntu
Esory ny fidirana amin'ny 3rd App amin'ny kaontinao an-tserasera
Ny KDE Neon dia miorina amin'ny Ubuntu 18.04 'Bionic Beaver'
iPhone Windows 8 fitaovana Rafitra fikirakirana Windows Plugins Nginx fifamoivoizana fikarohana takelaka fikirakirana Cortana SSD famerenana Windows 10 Support Ubuntu SEO windows update 'App ubuntu 15.04 Unix Command Bing Microsoft Facebook OS X rindrambaiko fitaovana finday bilaogy finday avo lenta CentOS web server Linux Mint Time Ubuntu 16 API Server PPA PDG Samsung Galaxy 04 Chrome command line Windows Phone taona Unité centrale app store haino aman-jery sosialy WordPress SSH MAMAKA Phone HTML fitaovana Twitter 10 USB Database Fitaovana finday endri-javatra Performance PHP Linux Users One ' famotsorana File Debian nbsp GNOME tahirin-kevitra IP adiresy Google bilaogy Company Malagasy Bible Firefox Ubuntu 14.10 HTTP loharano misokatra lalao CentOS 7 vaovao farany HTTPS Ubuntu 14.04 toe-tsaina ram Toetoetra "PC Samsung fanamarinana Microsoft Windows Screen lalao Video Apple Watch Up " rafitra Plugin Linux Ubuntu Systems afa-po raki-daza hametraka Apps fitaovana YouTube Apache web browser Android MySQL paoma
Mampiasa mofomamy mba ho azo antoka fa hanome ny tsara indrindra ianao traikefa eo amin'ny tranonkala. Raha manohy mampiasa ity Ndao isika dia mieritreritra fa faly ianao izany.OkPolitika fiarovana fiainan'olona